Igbo, John: Lesson 089 - Udo udo Kraịst (Jọn 14:26-31) | Waters of Life
Home – Igbo – John - 089 (Christ's farewell peace)
3. Udo udo Kraịst (Jọn 14:26-31)
26 Ma Onye-Nduzi, bú Mọ Nsọ, Onye Nnam gēzite n'aham, Ya onwe-ya gēzí unu ihe nile, me kwa ka unu mara ihe nile M'gwaworo unu.
Ònye na-anwa ikwu na ọ ghọtara ihe niile okwu Kraịst pụtara? Ma ònye nwere ike iburu okwu ya niile ma ọ bụ mee ya? Ndị na-eso ụzọ na-echegbu onwe ha na nri anyasị nke Onyenwe anyị lere ihe ọjọọ ahụ na ihe ọ ga-eme. Ha enweghị ike icheta ọtụtụ ihe Jizọs kwuru na okwu mmechi ya, ma e wezụga Jọn.
Jizos kasiri Jizos obi site n'ichefu ihe banyere ndi náeso zondi ah, ebe ha matara na Mmo nke eziokwu gaabi akwasi ha n'ìhè ma mee ka ha dika ogbara ha ume. Mmụọ nsọ na-aga n'ihu n'ọrụ Jizọs na otu uche ahụ na ebumnuche ya. Ọ na-echebe ndị na-adịghị ike. Jizos aho ghi ndi ah náenweghi ihe banyere ya, ndi oma na enweghi amamihe na okwu oma; kama ọ họọrọ ndị ọkụ azụ, ndị na-atụ ụtụ isi na ndị mmehie na-eme mmehie ka ihere mee ka ihere dị elu nke ụwa nke mmụta dị elu. Nna nke ebere ji mmụọ ya zigara ndị na-enweghị ike ime ka ha bụrụ ụmụ ya, ndị nwere nkà nke ịdị umeala n'obi, ịgọnahụ onwe ha na ibi ndụ n'ezi.
Jizos ekwuputaghi akwukwo n'azu, okwuputaghi kwa ozioma ya nye onye nwere ike igbanye ufodu akwukwo ma obu chefuo ihe ahu. O ji obi ike na-atụ anya ka mmụọ nke eziokwu kụziere ndị na-eso ụzọ ya, na-enwu, na-eduzi ma na-echetara ha ihe niile o kwuru. Ozioma ah b otù nime ihe di icheiche nke Mmo Nso rue taa. O mere atụmatụ nke nzoputa nye asusu mmadu, na icheta ndi na-eso ụzọ; ma Mmụọ chetara ha ma kụziere ha, na-eme ka ha dịrị n'okwu Jizọs ka Mmụọ Nsọ we nye Ọkpara ahụ otuto site n'aka Onyeàmà ahụ. Anyị enweghị akwụkwọ ọzọ ma ọ bụghị akwụkwọ nke ndị ozi Kraịst, bụ ndị jiri obi umeala gosi ụwa ihe ọmụma na okwukwe ha natara. E tinyeghị okwu ndị ọzọ n'ọnụ Jizọs. Nkwusa ha adịghị ada ụda na akọrọ akụkọ na-agwụ agwụ n'oge, mana Mmụọ ahụ emeela ka ịdị mkpa nke akụkọ ndị a dị mkpa ruo taa. Mgbe anyị na-agụ ozioma ahụ, ọ dịka ma ọ bụrụ na anyị na-agụ ihe ndị mere n'oge anyị. Ọ bụrụ na anyị gee ntị n'okwu Kraịst, ọ dị ka ọ bụrụ na o metụrụ ntị anyị aka ya. Onye na-ekwu na ndị na-eso ụzọ mepụtara ma ọ bụ gbaghaa ozioma mbụ ahụ na-eleghara Mmụọ nke eziokwu anya, ebe ọ bụ na Mmụọ Nsọ enweghị aghụghọ; ọ bụ Eziokwu na Ịhụnanya.
27 Udo ka m hapụrụ gị. Udo m na enye gi; ọ bụghị dị ka ụwa na-enye, nye m gị. Ekwela ka obi-gi ghara ilọ miri;
Jizọs nyere ndị na-eso ụzọ ya udo, na-agwụ okwu nkesa ya na ihe ndekọ a, udo nke karịrị otuto nile mmadụ. Ọ na-apụ, ma o nyere udo ya ka ọ na-ezukọta mgbakọ ha. Ọ na-ekwu okwu banyere udo anụ ahụ dị ka akwụkwọ akụkọ tabloid na-eme. Ọnwụnwa aghaghị ịbịa ebe ọ bụ na mmadụ dị iche na Chineke ma ọnụma ya dabere na ajọ omume nile nke ụmụ mmadụ. Jisos kwuru banyere udo di iche, udo n'onu akuko, nke sitere na mgbaghara nke nmehie nke neme ka ayi na Chineke di n'udo ma no n'udo n'uwa. Udo nke Kraist bu Mo Nso, ike nke ebighebi nke sitere na Chineke nime Ya na ichoghachikwute Ya.
Ịgha ụgha, ịkpọasị na ime ihe ike, igbu ọchụ, anyaụfụ, anyaukwu na adịghị ọcha bụ ndị zuru ụwa ọnụ. Mana Jizọs nyere anyị iwu ka anyị ghara ikwe ka ebili mmiri ndị a Setan merie anyị. Onye ojo ahu bu onye isi nke uwa nka, ma nime Jisos, onye m'huru n'anya, udo adiwo nke neme ayi ka ayi ghara iru na njo na obi nkoropu. Ọ na-emekwa ka anyị ghara inwe obi mgbawa na egwu ọnwụ. Onye kwere ekwe nime Kraist bi n'ime Chineke na Chineke nime ya. Nke a ọ na-emetụta gị? Jizọs dina n'ụgbọ mmiri n'etiti oké ebili mmiri ahụ. Ndị niile nọ n'ụgbọ mmiri ahụ siri ike ka mmiri jupụtara arịa ahụ. Mgbe ahụ Jizọs biliri ma baara oké ifufe ahụ mba ma kwụsị nwayọọ. O we si ndi nēso uzọ-Ya, Unu ndi okwukwe ntà, n'ìhi gini ka unu nātu egwu?
28 Unu onwe-unu nuru otú m'siri unu, Mu onwem nāla, m'gābiakute kwa unu: ọ buru na unu hurum n'anya, unu gāṅuri ọṅu, n'ihi na M'siri, Mu onwem nālakuru Nnam: n'ihi na Nnam ka Mu onwem uku. 29 Ub͕u a agwawom unu tutu ya eme, ka, mb͕e ọ bula, ka unu we kwere. 30 Mu onwem agaghi-agwa unu okwu ọzọ kari; n'ihi na onye-isi uwa nābia, ọ dighi kwa ihe ọ bula nimem. 31 Ma ka uwa we mara na Mu onwem huru Nna-ayi n'anya, na dika Nnam nyerem iwu, otú a ka m'nēme. Bilie, ka ayi si n'ebe a pua.
Ndị na-eso ụzọ nọ na-echegbu onwe ha ka Onyenwe ha kwughachiri akụkọ ahụ na ọ ga-ahapụ ha. Nkewa ahụ bịaruru nso. Ọzọ, Jizọs kwadoro ọpụpụ ya, ma kwusiri okwu ike na ọ na-alọta. O kwuru, sị, "Ṅụrị ọṅụ, ana m ahapụ gị, n'ihi na m na-agakwuru Nna m, na-aṅụrị ọṅụ mgbe m na-aga n'ala nna m nke mbụ, agaghị m etinye gị ihe ọ bụla dịka nhụjuanya nke obe. Ihe m na-agwa gị bụ banyere ịdị n'otu gị na Nna, ọ bụrụ na ị hụrụ m n'anya, ị ga - aṅụrị ọṅụ mgbe m laghachiri n'eluigwe.Echere m Nna m ka m karịa, m hụrụ Ya n'anya nke ukwuu, mana ịhụnanya m agaghị agwụ M ga-abịakwute gị na Mmụọ Ya."
Jizos weputara nke oma Nna nke ha ka ha mata ebube Ya ma rapara n'aru Ya, ka ha di kwa njikere maka nkpa ha si n'aka Nna-ukwu nke di nso n'onwu. Jizos choro ka ha cheta naobla nwna ano ghi kwa na Chineke b onyeiro ya. Udo nke di n'agbata Nna na Okpara diri Nna ya ka Nna ya ga-aduru ya gaa n'iru ya.Okwu ọzọ adịghị mkpa; Jizọs biliri iji mezuo ihe Nna ahụ kwuru, nke ahụ bụ mgbapụta ụwa n'elu obe. Mgbe ahụ Mmụọ ga-abịakwasị ndị na-eso ụzọ ya. Mgbapụta a ga-emetụta mmadụ niile. O choro ka onye obla mara banyere ihn'anya nke Chineke.
Mgbe ahụ, Jizọs na ndị na-eso ụzọ ya hapụrụ ụlọ elu ahụ ebe o debe ọgbụgba ndụ Ọhụrụ ahụ, wee banye n'ọchịchịrị nke abalị, na-agafe ndagwurugwu Kidron. Ha jere ije n'ugwu Oliv ruo n'Ogige Gethsemane, ebe onye nrara ahụ zoro.
EKPERE: Anyị na-ekele gị, Onyenwe anyị, maka udo gị. I mewo ka obi anyi dị ọcha ma mee ka anyi zuru ike. Gbaghara nchegbu anyị, egwu na obi nkoropụ na iyi nke ịkpọasị, esemokwu na nrụrụ aka. Daalụ maka Mmụọ gị iji chebe anyị n'udo. Ka o chetara anyị n'oge ọnwụnwa nke okwu gị dị ike, ka anyị wee ghara ịdaba na mmehie na enweghị okwukwe ma ọ bụ ọbụbụ ọnụ nke obi nkoropụ, ma lee anya na ị na-ekpe ekpere n'echere olileanya, nwee ndidi n'inwe obi ụtọ. Ekele gị na ụzọ anyị na-alaghachikwuru Nna. Anyị na-akpọrọ gị, Nwa Atụrụ Chineke, maka ịkwado anyị ụlọ n'eluigwe.
Gịnị bụ udo Chineke?
NNOYCHA - 5
zitere anyị azịza ziri ezi maka 12 n'ime ajụjụ 14 a. Mgbe ahụ, anyị ga-ezitere gị usoro nke usoro ọmụmụ a.
Ntak emi Jizos ekenyịme ndinam Meri?
Gịnị ka ịbanye na Jerusalem pụtara?
Gịnị kpatara ọnwụ Kraịst ji bụrụ eziokwu dị ebube?
Gịnị ka anyị na-aghọ ụmụ ọkụ?
Gini bu ihe Chineke nyere n'iwu nime Kraist nye madu nile?
Gịnị ka Jizọs na-asa ụkwụ ụkwụ ndị na-eso ụzọ ya?
Gini ka any i na-am uta site n'ihe nlereanya Kra ist?
Gini bu ihe ebube nke Jizos gosiputara mgbe Judas rapuru ya?
Gini bu nmekorita nke di n'etiti Kraist na Chineke Nna?
Kwuo ihe bụ isi maka ekpere a zara!
Olee otú ịhụnanya anyị nwere n'ebe Kraịst nọ na-eto eto na olee otú Atọ n'Ime Otu si dabara anyị?
Gini bu udo nke Chineke?
Echefukwala ide aha gị na adreesị zuru ezu na nhazi akwụkwọ ahụ, ọ bụghị naanị na envelopu ahụ. Ziga ya na adreesị na-esonụ:
Mmiri nke Ndụ,
Page last modified on March 05, 2020, at 06:34 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)